Abkhazia - endaweni enkulu iholide izivakashi: a sezulu nakwezifudumele, ingqalasizinda emangalisayo futhi ngamanani ezikhangayo. Kukhona ngempela eziyinkinga ukuze uthole ngokuqondile indawo yokuhlala kwakho. Empeleni kufanele senzeni ngezigaba eziningana. Okokuqala, kudingeka uthole kusuka endlini baye edorobheni ethile bese wenza ushintsho.
Isixazululo elilungile ngokuvamile ukuze uthole Adler ekuqaleni, bese uthole ku Abkhazia. Indawo ekhethiwe ngengozi ukufakelwa Adler. Kanjani ukusuka Adler ukuba Abkhazia? Pitsunda kuyinto komnikazi osondele kulowo. Ibanga - 20 kuphela km ezingasogwini, futhi inhloko-dolobha, Sukhum - km 126 kuphela.
Ngemva kokuthola lolu lwazi, abahambi eziningi uyazibuza kanjani ukusuka Adler ukuze Abkhazia. Ekuqaleni kufanele uthole ekhaya kuya Adler. Ukuze ufike lapho nje ngendiza noma ngesitimela. Indlela esheshayo - kungcono indiza. izivakashi eziningi ngesikhathi esifanayo eyeka izindleko injabulo enjalo. Inani travel kwelinye direction kuyoba yini eziyinkulungwane ruble.
Izincwajana zemininingwane kulesi simo kungaba imodi ukonga ngaphezulu zokuthutha. Lokhu kusebenza ikakhulukazi lesibili ekilasini ukuthutha. Uma uthanda ukuhamba ngaphezulu kahle, ngendlela gumbi, kungcono ukukhetha indiza. Izindleko kuzohluka kancane, kodwa isikhathi sokuhamba ngeke zingancishiswa ngokushintsha izikhathi eziningana.
Kusukela Adler sezindiza kuze kube semngceleni Abkhaz
Ngemva kokufika umbuzo uwukuthi kufanele kwenziwe kanjani ukusuka le Adler sezindiza e Abkhazia. Ungqimba ongakhetha. Road engafinyelelwa ngeteksi, ikhumbi noma ibhasi. Ngu isitimela ungakwazi ukuhamba ngesitimela noma isitimela. A ulwandle zezivakashi ukuthatha isikebhe.
Namanje lapho behlela uhambo zabahamba esizayo awakhathazeki kanjani ukusuka Adler ukuze Abkhazia. Impendulo lincike ohlotsheni yokuthutha kanye nokungcebeleka. Isikhathi sokuhamba ingase ihluke amaminithi ambalwa amahora 5.
Ngokucacile bebuza izingqondo zezivakashi kokuphazamisa umbuzo Adler ukuba Abkhazia njengoba ukuya yeenthuthi indlela okufanele sihambe ngayo? Yebo, kuze kube semngceleni nge Abkhazia, futhi angafinyelelwa ngezinyawo. Kuzothatha nje isigamu sehora, ngoba ibanga - mayelana 8 km. A uhambo ku ezokuthutha kuyoba ngokushesha. isikhathi sokuvakasha - imizuzu 10-15.
Ukuze bewela umngcele akudingekile ukuba zithole iphasiphothi. iphasiphothi Russian Abaningana impela okwanele.
Ngaphambi Abkhazia Adler itekisi
Imodi lokuqala ezokuthutha oluthandwa izivakashi zokufuna ukuba baqonde indlela ukusuka Adler sezindiza e Abkhazia, itekisi.
Kuthatha wena kuze kube semngceleni. izindleko Fun kuhluka ruble 200 kuya 400. Konke kuncike iphuzu kokuqala ukuhamba, futhi iklayenti ikhono ukuxoxisana. Ngemva kokuwela umngcele kuyodingeka ukudlulisela ezinye izimoto. Itekisi ebithwele abagibeli kuwo umuzi Sukhum izobiza ruble 1500.
Uma Nokho, lapho enza isinqumo ngokuphathelene nendlela ukusuka Adler ukuba Abkhazia, kukhona isifiso nekuwusebentisa ngenduduzo esiphezulu, kungcono ukuze uthole ngqo uya khona. Shayela ukuya emzini Gagra kungaba ruble 2700. Ngaphambi Sukhum uhambo izobiza ruble 3500.
I inzuzo kule uhambo kuzoncika isibalo sabantu emotweni. Ukuvakashela inkampani kuyoba kwezomnotho iphila. Lokhu kuyoba travel inketho ezimenza azizwe atjhaphulukile. Usese ukudlula ukulawula iphasiphothi kanye emgqeni engakaze kukhanselwe. Uma ushintsha imoto ensimini Russian futhi Abkhaz babe kabili usaphatha umthwalo. Futhi umngcele nabo zingavumi kakhulu.
Ngaphambi Abkhazia ngebhasi
Uma ukuhamba ngetekisi ukuphumula angeke ngakhokhela it ngalesosikhathi ukophula ibhasi. Kuyinto yokukhulumisana emangalisa kunazo zonke zokuhamba. Zonke amabhasi ukuya kuphela kuze kube semngceleni, esemgwaqweni edolobhaneni kumnandi. Ngemva kokudlulisa umngcele futhi ipasipoti control izimali izivakashi beze kanye namabhasi Abkhazia.
Amatekisi namabhasi asuke esiteshini sesitimela idlule esibulalayo e Adler. Uma kungekho ukuminyana emzileni komgwaqo kuzothatha Ningabizi lutho ngaphezu kwemizuzu engu-20. Akusikho isikhathi esingaphezu itekisi. Yilokho nje intengo izikhathi eziningana aphansi. Kuzoba ruble angu-30.
Ate indawo emzini Sukhum, insimu Isi-Abkhazian kwi isidingo sokukhokhela itekisi ruble 200. Isikhathi uhambo oluzothatha amahora cishe unyaka nesigamu. Ngakho, ngo-Gagra naseNew Athos engafinyelelwa ngokushesha futhi eshibhile.
Enye inzuzo obungenakuphikwa yezokuthutha okunjalo kuyoba ukuthi stop yokugcina "Psou" itholakala eduze ngokushesha yokuhlola. Kwaba kukhona ukuthi onogada basemngceleni ayohlola namadokhumenti isheke.
Abalandeli ingakwazi inombolo umzila taxi 40. Kuyinto kwesizini. Uma eside ibhasi ugibele esitobhini sebhasi, ungasebenzisa imizila №№ 125C, 173 futhi 117. Amabhasi Kufanele kukhethwe ngaphansi izinombolo 125 futhi 173. Bona zazitholakala idolobha kungakhathaliseki ukuthi isikhathi sonyaka.
Isikhathi ukudlula ekulawulweni kweminyele kufanele kube ukuchitha eziningi. Kanye queuing nazo zonke izinqubo ukuhlolwa kungathatha imizuzu engaba ngu-40. Isikhathi ibalwa kusukela zombili.
Ngaphambi Abkhazia ngesitimela
Uma wesitimela like ngaphezulu bese izivakashi axakwe kanjani ukuze uthole ku w / e Adler ukuze Abkhazia. Ungasebenzisa zonke okufanayo ibhasi, itekisi, ibhasi noma ukushayela kusuka Adler ukuba Abkhazia ngesitimela. Imvamisa izitimela incike isikhathi sonyaka. Ehlobo baba zazitholakala kaningi kunanoma yisiphi esinye isikhathi sonyaka.
Ungathatha isitimela nsuku zonke ngesikhathi 05,24 isikhathi eMoscow. inombolo zemininingwane - 306M. Kungenzeka ukuthi uye dolobha Sukhumi. isikhathi sokuvakasha kuzaba ma-iri ama-5. Ekuqaleni, iphuzu Ukuhamba isitimela eMoscow.
Uma ufisa ukuhlala isitimela angaba inhloko-dolobha yaseRussia, noma ngokuqondile Ntambama. isikhathi sokuvakasha kusukela eMoscow ngema-awa lange-40. Kuyinto isikhathi eside ngokwanele. Ngakho ngokushesha undize uye Adler indiza, bese sithathe isitimela.
Izindleko zokuhamba kusukela Adler e lesibili ekilasini namakalishi yakhiwa ruble 645. Lena ezishibhile kakhulu futhi elula ngoba isitimela kufanele abe umzila unyaka wonke.
Phakathi nenkathi ehlobo ukusiza nge inkinga kanjani ukusuka Adler ukuba Abkhazia kungaba ukuqeqesha inani 479A. Point of ukuhamba kuleli cala - Petersburg. Kodwa zithi cababa on kuye - 03,23 kanye uhambo zonke okufanayo - 5 amahora.
UMzila ekulawulweni kweminyele ngesikhathi esifanayo kunesidingo. Kungakapheli nehora edolobhaneni Merry umngcele onogada izoya ku ukuhlola ukwakheka kanye izivakashi imibhalo. Ensimini ka Abkhazia, esiteshini Gantiadi, le nqubo kuyokwenzeka ngokushesha kakhulu - nje isigamu sehora.
Uma iphuzu iholidi noma uhambo abakhethiwe okusha Athos, Gudauta, Gagra, ngesikhathi yokupaka esifushane, esifushane, ungakwazi ukuba sehle esitimeleni. Lena ngempela elula, kodwa kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi ubude lonke wojantshi ninezimiso iyunifomu. amathikithi Ukuthengwa Kufanele nifeze okungenani izinsuku 45 ngaphambi sokuhamba okuhleliwe. Kungenjalo, bamane babe.
Isihambi akufanele bayakhohlwa khona imithwalo. Phela, ukwenza ukufakelwa izikhwama eziyinkinga. Uma kungenzeka, kungcono uthenge ithikithi esitimeleni ngqo kusuka Voronezh, eMoscow Petersburg. Kulokhu, ngeke uqhubeke ngqo emzini Sukhumi, futhi akudingeki ukuba afeze ukufakelwa.
Ngaphambi Abkhazia Adler ngesitimela
Fans of izitimela ngeke banethuba eliyingqayizivele: ukusuka Adler ukuze Abkhazia bebodwa kungaba esitimeleni. izitimela ezimbili DAILY zazitholakala umzila phakathi Adler futhi Abkhazia. Lolu hlobo ezokuthutha kancane ezibizayo ezingaphezu kuka ibhasi, kodwa namanje ezishibhile itekisi.
Inzuzo elingenakuphikwa uhambo kuyoba izindleko kwezimali nezindawo langa ngaphandle kwefasitela. Endleleni kukhona izitobhi eziningi. usungaqala aphumule:
Shiya isitimela emngceleni akudingeki. onogada basemngceleni kuyoba esitimeleni kagesi, futhi uhlole imibhalo. Bakwenza kabili: okokuqala - ohlangothini isiRashiya, bese - ohlangothini Abkhaz.
Izitimela asuke esiteshini Adler ku 07-47 futhi 14-21. Ukufinyelela emzini Gagra aphumelele amahora akukho ngaphambili kuka-2, uzikhokhele ruble 140 ithikithi ngalinye.
Uma uya khona okwakuseduze layo umuzi Sukhum, kuzodingeka akhokhe ruble 200. Kodwa isitimela esiya Sukhumi awufiki, khona-ke kungcono ukusizakala isitimela esuka eMoscow. inombolo zemininingwane - 75C.
Ngaphambi Abkhazia ngemoto
Thola ebusuku kusukela Adler ukuba Abkhazia akuyona elula njengoba usuku. Ngokushesha ohlwini yezokuthutha kufinyeleleke ayasuswa amabhasi kanye namatekisi. Izitimela futhi kudingeke ukuba ulinde kuze kube sekuseni. Kodwa amatekisi kanye nezimoto yangasese njalo amasevisi izivakashi.
Yingakho eminyakeni yamuva, abaningi bakhetha ukusebenzisa izimoto zabo. Lokhu akukhawuleli ukunyakaza. Ukuze unqobe ingxenye enjalo elincane indlela ngeke kube nzima.
Ngaphambi kohambo, izivakashi peruse elula of yomgwaqo phakathi Adler futhi Abkhazia. Fika ngemoto, ungafunda kusuka abahambi abanolwazi. abahambi ongumpetha bayajabula ukwabelana umzila.
On lonke umzila kukhona izikhombo eziningi. Ngakho-ke, ngisho ngaphandle kwabo iqhaza engafinyelelwa ngaphandle kwezinkinga. Dlula ukulawula iphasiphothi, futhi, ngeke kube nzima. Imigqa emide babonakala kuphela isizini isiqongo - July no-August.
Ngaphandle kwefasitela, wonke umzila ziyojabula ebusweni amehlo amanzi nezindawo ezisogwini. Lokhu kuzoqala lonke isendleleni. ukuphindaphinda ngesikhathi ngokungabi bikho ukuminyana nezinye izinkinga endleleni, ngeke kusaba khona okudlula amahora amabili nesigamu.
Uma imoto yakho siqu ayikwazanga ukuthola nganoma yisiphi isizathu-ke ukusiza ongafinyelela izindawo ezihlukahlukene ukuze uthole abangane travel. Ungathola izivakashi ehamba ngendlela efanayo. Ukuze kuncishiswe izindleko uhambo, ukuze ukwazi ukusebenzisa isevisi noma unezingane imoto yakho siqu. Izikhangibavakashi zisiza ukukhokhela uphethiloli, futhi isikhathi inkampani fly ngokushesha.
Ukudlula komngcele imoto yakhe
Lapho ehamba ngemoto, ungakhohlwa mayelana imibhalo. Ukuba khona kwabo lihlolwe compulsorily ngesikhathi umngcele. Umshayeli kufanele abe ipasipoti kanye ilayisense yokushayela. Imibhalo ku imoto ngesikhathi esifanayo futhi, akufanele neze kushaywe indiva.
Umshayeli ne ekulawulweni kweminyele Kumelwe nilethe Isihloko. Lena ngempela ngokwanele, uma imoto e ubunikazi bayo. Uma isilawuli kwenziwa yi-proxy, kubalulekile ukuba ube amandla ommeli nge ilungelo phesheya.
Kodwa loluhambo siyizinsuku iphuzu elilodwa ezimbi. inqubomgomo MTPL ensimini ka Abkhazia ngeke usebenze. Futhi umshwalense ensimini ka Abkhazia ngeke ikhishwe. Ngakho-ke, uma uvakasha kumele uqaphele kakhulu.
Lapho bewela umngcele ngemoto ensimini ka Russia bonke abagibeli kudingeke ukuba ngiphume futhi ukukhiqiza imibhalo edingekayo ukuze ihlolwe. Umshayeli, kodwa imibhalo kufanele owethulwe ukuhlolwa isiqu. Thola nge wemithwalo akudingekile. Ngemva kwalokho, wonke umuntu angakwazi ukuthatha isihlalo emotweni bese uqhubeka ushayela.
Ensimini ka Abkhazia isheke kwenziwa kancane ehlukile. Abagibeli ukushiya imoto akudingekile. Kufanele kube khona ekuhlolweni kwemibhalo kuphela ishiye kuphela umshayeli gumbi.
Uma kuphakama noma imiphi imibuzo, bese bewela umngcele kuthatha imizuzu embalwa.
Ngaphambi Abkhazia a isikebhe
Ehlobo ukusuka Adler ukuba Abkhazia ngemikhumbi kungaba mnandi kakhulu. Phumula ngesikhathi siqala endleleni. ithuba okunjalo uyodala isikebhe ngesivinini. Izibuyekezo zokuthutha omuhle kuphela.
Ngo izinombolo kuya ngisho kwamakhasimende - the isikebhe "Sochi-2". Isikhathi sokuhamba kuzoba okungenani ihora. Intengo ezokuthutha ezinjalo - ruble 500. Izingane ezivela engu-3 kuya ku-12 kuzodlula ngoba ruble 250. Uma ingane akanayo iminyaka emithathu, uhambo kuyoba mahhala kuye. Ukhokha lohambo kungaba ehhovisi wesishiyagalombili esesihlalweni echwebeni kwedolobha Adler. Ikheli ebhentshini elingaphansi - Ukukhanyiselwa Ulitsa, 3 ..
Isikebhe uya kanye ngosuku kuphela. Adler ebashiya ekuseni ngesikhathi 9:30 bese ibuyisela at 19:00. Lolu hlobo ezokuthutha kuthandwa kakhulu, ngakho banakekele amathikithi kusenesikhathi kungcono.
Ekugcineni, uma umuntu kusukela izivakashi wadida umbuzo kanjani ukusuka Adler ukuba Abkhazia, kulolu khetho ngenhla, ungakhetha ezifanele kunazo. Into ebaluleke kakhulu - ukuthola lokho Ngifuna uthole kusukela uhambo.
Uma ufuna, futhi ngendlela ukuchitha isikhathi induduzo, ukukhetha awe kwi taxi noma imoto yakho siqu. Kodwa lokhu akulona okungcono isabelomali ongakhetha. Isitimela futhi isitimela buzoba buncane elula, kodwa eziphansi kakhulu.
Tour amabhasi kanye namatekisi, ngisho kanye umthwalo, kungaba uyibize ngokuthi ukhululekile, kodwa kuyoba ithuba isabelomali. Sahamba isikebhe kuyoba choice kujabulise kakhulu futhi emnandi. Ngemva ukuhamba phezu kolwandle njalo kuletha izinkumbulo ezinhle kuphela.
Into ebaluleke kakhulu sokwenza noma imuphi amaloli akhethiwe - ungakhohlwa banakekele amathikithi futhi awubashiyanga endlini ajabule. Phela, uma sibheka umhlaba omuhle, ngisho alithandeki kakhulu ekuqaleni shazi itekisi kungaletha eziningi imizwelo egqamile. Uhambe kahle!
Ancient Umbhoshongo Djoser - omunye emhlabeni ezikhangayo abadumile
Ezikhangayo elaziwayo elincane Petersburg
Yini amapaki e Khimki? incazelo
Ibhomu lenuzi elinamandla kunawo wonke emhlabeni. Kuyini namandla kunomFilisti ibhomu: cleaner noma Fusion?
Lapho leaf uphela lukagamthilini? Okushiwo leaf ukuwa
Izinhliziyo lendwangu ngezandla zabo. Indlela yokwenza inhliziyo? Izinhliziyo lendwangu
Ichibi Sarykamyshskoe: incazelo, umlando, amaqiniso athakazelisayo
Elizenzekelayo enema: ukusetshenziswa, imishini ukubeka